Archives Our Lady - Fanisana ho an'ny fanjakana
Tag Archives: Ilay Reninay
Edson - Miseho ny vadintsika…
… Hanangona ny zanany am-bavaka.
Valeria - Jereo mialoha
Tsy misy olona afaka maka ny fiainana mandrakizay aminao.
Ao amin'ny Threshold
Edson Glauber - Hanging by Thread
Hozongozonina toy izao tontolo izao ny tontolo
Luz de Maria - Raiso ny andraikitra amin'ny fahotanao
Tsy maintsy mahita ny tenanao tahaka anao ianao.
Ao amin'ny Sinu Jesôsy - The Mediatrix of All Graces
Maria, Neny, no vadin'ny mpanjaka ao amin'ny fanjakana.
Luz de Maria - Fivoarana kômonisma
Mikatsaka korontana eran'izao tontolo izao eo ambanin'ny fahantrana.
Gisella Cardia - Ny fotoana faran'izay ratsy indrindra ho an'ny olombelona
Hiaro anao aho.
Fampitandremana ao amin'ny rivotra
Rwanda dia fampitandremana ho an'izao tontolo izao…
Fanahy any Kalifornia - Asabotsy izay malahelo lehibe
Androany, manangona anao amin'ny sandrin'ny reniko aho…